Exclusive Coin စျေး - အွန်လိုင်း EXCL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Exclusive Coin (EXCL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Exclusive Coin (EXCL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Exclusive Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $331 290.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Exclusive Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Exclusive Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Exclusive CoinEXCL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.14Exclusive CoinEXCL သို့ ယူရိုEUR€0.118Exclusive CoinEXCL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.106Exclusive CoinEXCL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.127Exclusive CoinEXCL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.26Exclusive CoinEXCL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.879Exclusive CoinEXCL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.1Exclusive CoinEXCL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.52Exclusive CoinEXCL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.186Exclusive CoinEXCL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.194Exclusive CoinEXCL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.13Exclusive CoinEXCL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.08Exclusive CoinEXCL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.749Exclusive CoinEXCL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹10.48Exclusive CoinEXCL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.23.59Exclusive CoinEXCL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.192Exclusive CoinEXCL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.21Exclusive CoinEXCL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.36Exclusive CoinEXCL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.973Exclusive CoinEXCL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥14.76Exclusive CoinEXCL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩165.79Exclusive CoinEXCL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦53.22Exclusive CoinEXCL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽10.26Exclusive CoinEXCL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴3.88
Exclusive CoinEXCL သို့ BitcoinBTC0.00001 Exclusive CoinEXCL သို့ EthereumETH0.000351 Exclusive CoinEXCL သို့ LitecoinLTC0.00232 Exclusive CoinEXCL သို့ DigitalCashDASH0.00134 Exclusive CoinEXCL သို့ MoneroXMR0.00148 Exclusive CoinEXCL သို့ NxtNXT10.02 Exclusive CoinEXCL သို့ Ethereum ClassicETC0.0194 Exclusive CoinEXCL သို့ DogecoinDOGE38.12 Exclusive CoinEXCL သို့ ZCashZEC0.00138 Exclusive CoinEXCL သို့ BitsharesBTS5.32 Exclusive CoinEXCL သို့ DigiByteDGB5.14 Exclusive CoinEXCL သို့ RippleXRP0.455 Exclusive CoinEXCL သို့ BitcoinDarkBTCD0.0047 Exclusive CoinEXCL သို့ PeerCoinPPC0.49 Exclusive CoinEXCL သို့ CraigsCoinCRAIG62.21 Exclusive CoinEXCL သို့ BitstakeXBS5.82 Exclusive CoinEXCL သို့ PayCoinXPY2.38 Exclusive CoinEXCL သို့ ProsperCoinPRC17.13 Exclusive CoinEXCL သို့ YbCoinYBC0.00007 Exclusive CoinEXCL သို့ DarkKushDANK43.77 Exclusive CoinEXCL သို့ GiveCoinGIVE295.46 Exclusive CoinEXCL သို့ KoboCoinKOBO30.47 Exclusive CoinEXCL သို့ DarkTokenDT0.129 Exclusive CoinEXCL သို့ CETUS CoinCETI393.97